Kudya kweKisimusi muRussia | Absolut Kufamba
Munyika mune maKristu anosvika mabhiriyoni maviri nemazana mana vanopemberera kisimusi zvakasiyana, maererano netsika dzenyika imwe neimwe uye nesangano revaKristu. Pane ino chiitiko, isu tichataura nezvekuti zororo iri rinopembererwa sei muRussia uye ndeupi wakajairwa mutambo weKisimusi munyika ino.
Tsika idzo nyika ino inechekuita nezuva rino rinodakadza rakasiyana kwazvo neizvo isu zvatajaira. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve Kisimusi muRussia? Ramba uchiverenga!
1 Krisimasi inopembererwa rini muRussia?
2 Husiku hweKisimusi muRussia?
3 Iyo Advent Inokurumidza
4 Kudya kweKisimusi muRussia
5 Ndeapi maKisimusi akaimbwa muRussia?
6 Uye maRussia vanopemberera sei Santa Nöel?
7 Gore Idzva muRussia
8 MaRussia anofara sei paKisimusi?
Krisimasi inopembererwa rini muRussia?
Masangano echiKristu ane huwandu hukuru hwevakatendeka pasi rose, veKaturike nevePurotesitendi, vanopemberera kuzvarwa kwaKristu musi waZvita 25. Zvisinei, Chechi yeOrthodox haina kudaro. Kunyangwe vachigovana zvizhinji zvekutenda, dzidziso, uye tsika nemapoka ari pamusoro, vafundisi vazhinji veOrthodox vanopemberera Kisimusi muna Ndira 7. Asi chii chinangwa?
Muchokwadi, veOrthodox, kusanganisira maRussia, vanopembererawo Kisimusi musi waZvita 25. Ivo chete ndivo vanotevedzera karenda yaJulius, unova Ndira 7 pakarenda yaGregory.
Husiku hweKisimusi muRussia?
Nenzira imwechete iyo maCatholic vanopemberera Evha yeKisimusi musi waDecember 24, maRussia vanozviita musi waNdira 6. Na10 manheru, kubva kuKathedral yaKristu Muponesi muMoscow, mutungamiri wenyika anoita mutambo wechivanhu wenyika yese.
Iyo Advent Inokurumidza
Zvinonyatso kuzivikanwa kuti Advent inoitika pamberi peKisimusi, nguva yekugadzirira kuzvarwa kwaKristu. MuRussia uko kutenda kweOrthodox kwakanyanya, Advent inoitika kubva munaNovember 28 kusvika Ndira 6. Muchikamu chino, kutsanya kunoitwa kunoguma pazuva rekupedzisira reAdvent nekutsanya zuva rese. Inogona chete kutyorwa uye kudyiwa zvakare kana vatendi vachiona nyeredzi yekutanga.
Kutaura nezvekudya, Iwe unoziva here kuti ndeapi chaiwo madhishi anodyiwa pakisimusi yeKisimusi muRussia? Mhuri dzinowanzogadzira mabikirwo akasiyana. Izvi ndezvimwe zvakajairika.
Kutia: Imwe yemidziyo mikuru yepati. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvine chirevo chekufananidzira muchitendero cheOrthodox. Saka gorosi rinonongedzera kukumuka kwaKristu uye huchi hunomutsa nekusingaperi. Mhedzisiro yacho chikafu chetsika kwaunogona zvakare kuwedzera nzungu, mazambiringa akaomeswa uye mbeu dzepoppy.
Roast hanzi: Munguva yeAdvent yaisatenderwa kudya nyama kuitira kuti pakasvika Kisimusi, maRussia vaigadzirira nechido ndiro nechinhu ichi kuti vatsanye kutsanya. Roast geese yaive imwe yenzvimbo dzakakurumbira ndiro.
NguruveChimwe chikafu chinodyiwa pakudya kweKisimusi muRussia inoyamwa nguruve kana semaRussia mavanodaidza kuti "mukaka wenguruve." Iyo inopihwa yakagochwa ne porridge nemiriwo. Zvakajairika kuitora pakupera kweAdvent kupedzisa kutsanya.
Coulibiac: Iri keke rakazadzwa nderokukunda chero pati uye rinowanzo shandiswa pakudya kweKisimusi muRussia. Inogona kugadzirwa kubva pamhando dzakasiyana dzehupfu hwakasiyana nehove, mupunga, nyama, miriwo, howa, mazai. Zvakafanana nechikafu chakazara muchikamu chimwe chete chekeke!
Vinaigrette: Iyo saladhi yechinyakare yakagadzirirwa nemapatatisi, makarotsi, beet, magaka muvhiniga nemafuta. Kunyangwe nanhasi ichiri chimwe chemidziyo inodiwa yeKisimusi muRussia nekuti iri nyore kugadzirira uye isingadhuri. Nekudaro, mhuri dzinoda kutora ruzivo rwehukama hwavo kune imwe nhanho dzinowedzera hove dzakanaka senge sturgeon.
Olivier saladi: Iyo ndeimwe yakapusa saradi yekuitira mazororo. Ine karoti, hanyanisi, zai rakabikwa, mbatatisi, magaka, soseji nemapizi. Zvese zvakasanganiswa nemayonnaise.
Kozuli: Iyi ndeimwe yemaswiti anozivikanwa muRussia panguva yeKisimusi. Aya ndiwo makuki eKisimusi akagadzirwa neinotsemuka gingerbread nesirasi uye yakashongedzwa neshuga yechando. Mhando dzakajairika umo makuki anounzwa ndidzo ngirozi, nyeredzi dzeKisimusi, mhuka nedzimba. Iyo inoshandiswawo seyekushongedza kwemafaro.
Vzvar: Mushure mekudya kweKisimusi muRussia chinwiwa ichi chinopihwa se dessert. Iyo yakagadzirirwa muchoto ne compote yakagadzirwa kubva kumichero nemabriji ayo akarungwa nemishonga, zvinonhuwira uye huchi hwakawanda. Iyo yakanaka imwe nzira kune waini inopisa kana punch.
Tafura yakafukidzwa nehuswa, mukurangarira nzvimbo kwakazvarirwa Jesu, uye jira jena retafura rakaiswa pamusoro.
Ndeapi maKisimusi akaimbwa muRussia?
MuRussia mimhanzi yeKisimusi inotsiviwa nenziyo yechiSlavic inozivikanwa seKoliadki. Rwiyo urwu runowanzo kuimbwa musi weKisimusi neboka revanhu mumugwagwa vakapfeka zvipfeko zvemudunhu.
Uye maRussia vanopemberera sei Santa Nöel?
MuRussia, havazi Baba Nöel vanopa zvipo kuvana nekupaza nepazvioni zveimba yavo asi Ded Moroz achiperekedzwa nemuzukuru wake Snegurochka. Hunhu uhu hunounza zvipo kune vadiki paZuva reGore Idzva, pakarenda yeRussia muna Ndira 12.
Gore Idzva muRussia
Tichifunga nezvekuti Kisimusi iri musi waNdira 7 uye Eve yeKisimusi iri musi waNdira 6, karenda yeRussia inoenderera ichimhanya uye Gore Idzva rinopembererwa husiku hwaNdira 12-13. Bato rinozivikanwa se "Gore Idzva Idzva." Kuda kuziva, handiti?
Kubva panguva dzeSoviet, wanga uri mutambo wakakurumbira wegore uye pazuva iri muti wemisipiresi wegore Idzva unowanzo shongedzwa, uyo unove korona nenyeredzi tsvuku. Chiratidzo chemakomunisti.
MaRussia anofara sei paKisimusi?
MaRussia anofara munzira dzakawanda paKisimusi. Imwe yetsika dzakajairika dzeRussia kushandisa zororo iri kuenda kunonakidzwa neaizi skating rinks. Ivo vari pese pese!
Kune vana, wink shows dzakarongeka, iwo dingindira rekuberekwa kwemucheche Jesu uye idzo idiki dzakada kufanana.
Vakwegura vanosarudza kuenda kunotenga kuti vawane zvipo zveKisimusi. Zvitoro uye nzvimbo dzekutenga dzakashongedzwa nemhando dzese dzemwenje, maruva, miti yemisipiresi, varume vechando, nezvimwe. Vana vanowanzo kupihwa matoyi senge mumativi ese epasi uye vakuru vanopihwa mabhuku, mumhanzi, tekinoroji, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kudya kweKisimusi muRussia